Korona yeIndia & Northernmost state yenyika, Kashmir inonzi "Heaven on Earth" (Bhu-swarga). Kashmir Tour Packages uye Srinagar Pachipu dziri nyore nyore kuongorora makungwa akanaka muparadhiso yezvisikwa. Pahalgam Tourism inokwezva Bollywood Mafirimu ekupfura, pamwe neRidid River, nzvimbo dzakanaka dzekufamba-famba uye gedhi reMamarnath Yatra, anonyatsoita kuti zhizha rako rive rakakosha. Sarudza yako Kashmir Package yakanakisisa sezvaunoda uye unogona kunakidzwa nenzvimbo dzakawanda muKashmir seSrinagar, Sonamarg, Pahalgam uye Gulmarg.
Srinagar - Sonamarg - Pahalgam - Gulmarg (05 Nights / 06 Days | Mutambo Wokushanyira: 094)
ZUVA 01: YAKARUKA SRINAGAR
Paunosvika paSrinagar yeregeti, iwe uchasangana nemumiririri wedu uye iwe uchazoendeswa kuhotera yako kwaunenge uchizoenderera mberi kupinda. Masikati anoenda kunzvimbo dzinokosha dzeSrinagar City-Shankaracharya Temple uye Mughal Gardens (Nishat Bagh naShalimar Bagh). Usiku husiku huripo paImba.
ZUVA 02: SRINAGAR - SONAMARG - SRINAGAR
Mushure mekudya kwekudya muhotera, Mambakwedza, iwe uchange uchitungamirwa kwezuva rose rekufamba rwendo kuenda kuSamamarg.Sonamarg (Meadow yeGold) - Iyi nzvimbo inofadza kunaka, inhema muSindh Valley, inoyerera nemaruva, yakakombwa ne makomo uye akatarisa panzvimbo yakakwirira ye2690 m pamusoro pegungwa. Kushanyira zvishoma nezvishoma nevatashanyi, ine sarudzo yayo, makomo echando anotarisana nedenga rakachena. Ndiyo nzvimbo yakanyarara yokumhanya yakadzikidzwa neyakamera, silver birch, fir uye pine miti uye yekupedzisira kumira kweKashmir kurutivi rwekufamba kubva kuSrinagar kuenda kuLeh. Ichowo ndiyo nheyo yeimwe nzira dzinonakidza kuenda kumucheto kwakakwirira kweHamalayan Lakes. Mushure mekudya kwemasikati panzvimbo yekutengesa, fudza makamera ako nemufananidzo wekuona kwemawere. Iwe unogona kunakidzwa nebhiza kutasva paSanamarg (Optional). Manheru anodzosera kubva kuSamamarg kusvika kuSrinagar. Usiku huno huri paImba.
ZUVA 03: SRINAGAR - PAHALGAM
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwemafuro, tarisa kubva paimba yekutakura uye uende kuPahalgam, uchienda kunoshanyira Saffron minda yePampora, ona nyika yakanaka, minda yemupunga uye Awantipura matongo munzira.
Gara uchienderera mberi uchienda kuPahalgam (Mupata weVafudzi) uchishandisa musango wepaini, musangano wehova unoyerera kubva kurwizi Lidder uye Sheshnag Lake iyo inozivikanwa nezvakanaka.
Mushure mokunge mabiko enyu eresitorendi yepamba, rambai muchifamba nematomu uye mudya makamera enyu nemufananidzo wekuona kwakanaka kwemakomo. Iwe unogona kunakidzwa nebhiza kutasva pa Pahalgam. (Zvichida).
Usiku uhwo hugare pahotera muPahalgam.
ZUVA 04: PAHALGAM - GULMARG
Mangwanani mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera uye enda kune imwe nzvimbo inofadza kuenda kuGulmarg. Gulmarg (Meadow yeGoridhe) - Yakaratidzwa seyo nzvimbo yekushanyirwa neBritish muzana remakore re19th. Izvi zvisati zvaitika, vaMughal madzimambo vaifamba mumupata weGulmarg iyo inenge 03 kms kure uye kusvika-kusvika 01 km.
Inonyatsotarirwa mumupata wepine wakakomberedzwa wePir Panjal rwonzi pamusana wemamita 2,730 kumusoro kwegungwa uye imwe yevakakurumbira kune vanoenda kuKashmir. Iyo inewo imwe yenyika yakakwirira yepamusoro yegorofu zvidzidzo ne 18 mashizha, pamwe chete neklubhouse, iyo inzvimbo yezvakaitika kare iwe pachayo. Mumwe anogona kunakidzwa neGondola kana kuti Horse kutasva paGulmarg. (Zvichida)
Nokufambiswa kunofadza kwemhando isingawaniki, Gulmarg yakangobva kuvaka gondola inosimudza kubva kumusoro kwepamusoro kweGulmarg, kuburikidza nepine-clad slope inofadza. Kubvira kuGulmarg, pony nzira inotungamirira kumusoro kusvika Khilanmarg, Kangdori uye matsime manomwe, maawa mashomanana ne pony kwenguva refu netsoka.
Usiku huno huri pahotera kuGulmarg.
ZUVA 05: GULMARG - SRINAGAR
Mangwanani mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera uende kuSrinagar. Paunenge uchisvika, chengetera kuImba yeTeboat uye uzonakidzwa nokuzorodza Shikara ride (Zvichida) pagungwa - Iyo ndiyo inonyanya kunakidza uye inonakidza pane zvezororo muKashmir.
Usiku husiku huripo paimba yekutengesa muSrinagar.
ZUVA 06: SRINAGAR - TOUR ENDS
Mangwanani mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera uye gare gare iwe uchaendeswa kuSrinagar yendegeti panguva yekuenda kumhanya kuenda kumusha.